Izikwele zeseva yangasese factory - China abakhiqizi bezihlalo zangasese abakhiqizi, abahlinzeki
- Bamba iphakethe elilodwa lephepha lekhava yesihlalo sendlu yangasese elenga ipuleti - Idizayini eyakhelwe ukonga isikhala. - Umbala omhlophe uyatholakala ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zemakethe
IMIBALA YOMKHIQIZO - Bamba kuze kube yipakethe elilodwa lephepha lekhava esihlalweni sepuleti elenga ipuleti - Idizayini ehlanganisiwe yokonga isikhala .Ubuso obumenyezelayo. - Umbala omhlophe uyatholakala ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zemakethe UKWENZA IMINININGWANE - Yenziwe ngezinto zepulasitiki ezimhlophe ze-ABS, ezizogcina ukubukeka kwayo okusha okuhlanzekile kwezikhathi ezengeziwe. - Ukufaka unomphela ngama-screw sets. IMIKHIQIZO I-ADVENTAGE 1.Igobolondo lepulasitiki elinobuciko obukhanyayo obuhle, ubuciko bokuklama obuhle, obuhle futhi obusebenzayo, obufanele imali, qiniseka ukusetshenziswa kokuphepha okuphephile, okulula, nokuvikelwa kwemvelo. Izilungiselelo 2.Wall-agibele amahhashi, ukufakwa elula futhi kulula ukuyisebenzisa. Imikhiqizo yekhwalithi ephezulu enezinsizakalo zezinkanyezi, ikuvumela ukuthi ujabulise, qiniseka. I-4.Ifanelekile ikakhulukazi indlu yangasese yamahhotela aphezulu, izindawo zokudlela, ezokuzijabulisa, izakhiwo zehhovisi, indlu nokunye. 5.Ungakwazi ukuphrinta ama-logo akho kumshini wokuhambisa.
Ipulasitiki ye-ABS Wall Mounted 1/4 Fold dispenser
Ipulasitiki le-ABS Wall Mounted 1/4 Fold Toilet Paper Seat Cover dispenser 1.Injini yegobolondo enobuciko obubukeka buqhakazile, ukwakheka okunethezeka, okuhle nokusebenzayo, okufanele imali, qiniseka ukusetshenziswa kokuphepha, okulula, nokuvikela imvelo. Izilungiselelo 2.Wall-agibele amahhashi, ukufakwa elula futhi kulula ukuyisebenzisa. Imikhiqizo yekhwalithi ephezulu enezinsizakalo zezinkanyezi, ikuvumela ukuthi ujabulise, qiniseka. I-4.Ifanelekile ikakhulukazi indlu yangasese yamahhotela aphezulu, izindawo zokudlela, ezokuzijabulisa, izakhiwo zehhovisi, indlu nokunye. 5.Ungakwazi ukuphrinta ama-logo akho kumshini wokuhambisa. Igama lomkhiqizo I-Tolilet Seat Cover Cover Dispenser Model No. ZH-016-A Usayizi 21 * 30 * 5.5cm Qty / ctn 20 pcs / ctn Izinto ze-ABS plastic Carton size 44.5 * 35 * 64.2cm Ilogo ukuphrinta isikrini sikasilika Ingqikithi yesisindo 7.5kg Uhlobo Lokulungisa Ukulayishwa kwe-Wall 20'container: 5600pcs
Isipele se-Plastic ABS Wall Mount 1/2 Fold Toilet Paper Seat Cover
- Bamba iphakethe elilodwa noma amabili ka-1/2 amathawula ephepha esihlalo sangasese. - Umbala omhlophe uyatholakala ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zemakethe
I-Stainless Steel 1/2 Fold Paper Toilet Seat Cover Dispenser
- Bamba iphakethe elilodwa noma amabili ka-1/4 amathawula wephepha lezihlalo zangasese. - Idizayini eyakhelwe ukonga isikhala .Ubuso obumenyezelayo. - I-Silver Shiny Finish iyatholakala ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zemakethe